बिहिबार २७ कार्तिक, २०७७
काठमाडौ । हाम्रो देशमा कोही व्यक्ति ठूलो पदमा पुग्यो भने उनका छोरा, छोरी, भाई, भतिज मात्र हैन । गोरु बेचेको साइनोकोपनि सालो पर्नेपनि उनकै पछि लाग्छन् । तर नव निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेनकी श्रीमतीले विश्वका लागि नै एक सन्देश दिएकी छिन् ।
उनले अब आफु अमेरिकाको फष्ट लेडी बनेपनि आफुले गर्दै आएको शिक्षण पेसा नछोड्ने निर्णय सुनाएकी छिन् । उनले टिचिङ्ग पेसा मेरो कर्म मात्र हैन धर्मपनि हो । मलाई त्यसमा नै आनन्द छ जब मैले पढाएका कुनै एक व्यक्ति असल र राम्रो भएको खबर सुन्न पाउँछु ।
यो निर्णय सुनाउँन टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिएकी राष्ट्रपति बिडेन पत्नी जिल बिडेनले यसो भनिरहँदा टेलिभिजन हेरिरहनेहरुको आँखाबाट आँसु आएको थियो अन्र्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले समाचार लेखेका छन् । उनले यसो गरे बाहिर काम गर्ने बहालवाला राष्ट्रपतिकी पहिलो श्रीमती उनै हुनेछिन् ।
यहाँहरुलाई जानकारी गराऔँ श्रीमान बिडेन ८ बर्षसम्म उपरास्ट्रपति हुँदा पनि उनले टिचिङ्ग पेसा छोडिनन् । दुइ कार्यकाल बाराका ओबामा राष्ट्रपति हुँदा बिडेन उपराष्ट्रपति थिए । त्यो समयपनि पत्नी जिल बिडेनले टिचिङ्ग पेसा जारी नै राखिन् ।
We honor the few who have sacrificed so much for all of us, and we celebrate those who continue to lead in their own communities.
— Dr. Jill Biden (@DrBiden) November 11, 2020
उनि भन्छिन् मानिसले टिचिङ्ग पेसाको मुल्य बुझ्न सकुन र टिचरको योगदान बुझ्न सकुन । म यो पेसालाई हेर्ने मानिसको नजर परिबर्तन गर्न चाहन्छु । मौका यही हो । यसैले म ह्वाईट आउसबाट पढाउन जान कतिपनि अल्छि मान्दिन ।
हुन त मैले यो भन्दा पहिले श्रीमान बिडेन ८ बर्ष उपराष्ट्रपति हुँदापनि उपराष्ट्रपति भवनबाट पढाउन धाएकै हो । अबपनि म त्यो गर्छु यो मेरो व्यक्तिगत निर्णय हो । मलाई लाग्छ अमेरिकी ह्वाईट हाउस प्रशासन मेरो लागि बाधक हैन सहयोगी बन्नेछ ।
सायद समाजको दोष होला, हाम्रा सपना साना छन् । ठुलो कुराको कल्पना गर्न सिकिएन छ । श्रीमान–श्रीमती, छोरा–छोरीको जीवन तारिदिदा दिदै जीवन सकिने छ । निजी स्कुल पढाउदा पढाउदै गर्फिल्ड जस्तो अमेरिकी रास्ट्रपति हुने सपना देखिने भने छैन ।
पक्कै नेपाली माटोमा अहिले नै चै जॉर्ज ऑरवेल जस्तो ठूलो पदमा पुगिसकेपछिपनि पशु फार्मको कल्पना गरिने छैन । लियो टॉल्स्टॉय जस्तो दिनभरी निजी स्कुलमा पढाएर थाकेर साँझ गएर शान्ति र संबृद्धीका बारे लेख्न बसिने छैन ।
गेब्रीला मिस्ट्रल जस्तो निजि स्कुल पढाउदा पढाउदै नोबेल पुरस्कारमा नाम आउने छैन । कारण हाम्रो सपना साना छन् । बिद्यालय पढाउने मानिसले ठुलो सपना देख्न छोडेको छ । किनकी हाम्रो देश नेपाल हो । हामी नेपाली हौँ ।
अस्ट्रेलियाली सीमा खोल्न अझै सुरक्षित छैन : प्रधानमन्त्री मोरिसन
खुशीको खबर : भारतमा संक्रमित संख्या ह्वात्तै घट्न थाल्यो
दर्जन अस्पतालमा अक्सिजन सकिएपछि हतारमा गुडेको २२ टन अक्सिजन सहितको ट्याङ्कर पल्टियो
अर्को कार चालकले भर्खर स्यानिटाइजर लगाएका थिए अर्को चुरोट खादै आयो, लाग्यो भीषण आगो
छिमेकी मुलुकमा नेपालको जनसंख्या जति केटाले केटी नपाएर कुमार, नेपालकोपनि यही हालत त हुन्न ?
भारतलाई चीनबाट अहिलेसम्मकै ठूलो सहयोग: ३६०० अक्सिजन उत्पादक मेसिन पायो, नेपालले किन नमाग्ने
सक्छौ भने मलाई पक्राउ गर भन्दै मोदी सरकारलाई कांग्रेसका पूर्व अध्यक्ष राहुलले दिए चुनौती
कोरोना महामारीले आक्रान्त भारतमा अर्को संकट, तिव्र गतिको आँधीको असर नेपालसम्म आउने